ISaona Island, engaziwa ngeDominican Republic | Izindaba Zokuhamba
Maria | | América, I-Dominican Republic
Etholakala eningizimu-mpumalanga yeDominican Republic, i-Isla Saona ingesinye seziqhingi zayo ezinkulu futhi ingenye yezindawo ezinhle kakhulu ezweni. Itholakala esifundazweni saseLa Romana futhi iyingxenye yeParque Nacional del Este enwebela ngaphezu kwamakhilomitha-skwele ayi-110. Ukuba yingxenye yepaki kazwelonke, kugcina izici zepharadesi elishisayo: izimila ezijabulisayo nezingavamile, izilwane ezahlukahlukene, amakhilomitha amabhishi esihlabathi amhlophe namanzi ahlanzekile.
Akumangazi-ke ukuthi ingenye yezindawo ezithandwa kakhulu ukuvakashelwa yilabo abaseholidini eDominican Republic.
Okulandelayo, sizofunda kabanzi ngalesi siqhingi esihle saseDominican nokuthi yini engenziwa lapho ngesikhathi sokuvakashela e-Isla Saona.
1 Ungaya kanjani e-Isla Saona?
2 Yini okufanele uyenze e-Isla Saona?
3 Ungadla kuphi e-Isla Saona?
4 Ezinye izindawo ezithakazelisayo eDominican Republic
4.1 I-Punta Cana
4.2 Inhlonhlo iPedernales
4.3 UPico Duarte
Ungaya kanjani e-Isla Saona?
Ukuhambela e-Isla Saona ngomunye wemisebenzi ethengiswa kakhulu kunazo zonke yezakhiwo zamahhotela eDominican Republic. Njengoba inikezwe indawo njengepaki yemvelo, le ndawo ivikelwe ngokusemthethweni ngakho-ke ayinazakhiwo ogwini lwayo, okukuvumela ukuthi uthokozele imvelo engonakalisiwe futhi uthathe izithombe ezinhle.
Ukuya ohambweni oluya e-Isla Saona, kufanele uye eBayahibe, idolobha okusuka kulo amakhatholika nezikebhe ezihamba ngomkhumbi ziye esiqhingini. Kodwa-ke, noma yikuphi ukuvakasha ePlaya Bávaro noma ePunta Kana nakho kunikeza lolu hambo, yize kungahlelwa kusuka eSanto Domingo ngqo. Uhambo luthatha cishe amahora amathathu ukusuka eLa Romana.
Yini okufanele uyenze e-Isla Saona?
Okuheha kakhulu izivakashi kulesi siqhingi ngamasimu aso nemvelo yaso, njengechibi elikhulu lemvelo emhlabeni elisenkabeni yolwandle amamitha angama-400 ukusuka ogwini. Indawo ekahle yokuntywila uphinde ugeze njengoba ukujula kungafinyeleli kwimitha elilodwa.
Iphinde ivelele imifula yayo yamakhorali namabhishi ayo angapheli, abonakala ngesihlabathi sawo esihle esimhlophe namanzi acwebezelayo akhombisa imibala ehlukahlukene eluhlaza okwesibhakabhaka ehlangene nesibhakabhaka nelanga laseCaribbean. Kulamanzi singathola izinhlobo zasolwandle ezinjengezimfudu, izinhlanzi ezingajwayelekile kanye ne-starfish.
Ezinye izinhlobo ezingabonakala e-Isla Saona yizinyoni ezinhlobonhlobo eziningi: izinhlwathi, amaqhude, opholi, amagwababa, izigaxa, ama-vagua namajuba asendle.
Ngakolunye uhlangothi, i-Isla Saona inamadwala futhi inemigede eminingi nama-grottos endaweni esenyakatho-ntshonalanga, okuyindawo ethakazelisa kakhulu ngenxa yenqwaba yezinsalela zabantu bomdabu ezitholakale lapho. Ugu lunamaphethelo aphansi anamadwala futhi kulapho ikhona kuphela ikona lesiqhingi elinokuphakama okuncane ngaphezu kogu lolwandle elitholakala, elibizwa ngePunta Roca.
Ungadla kuphi e-Isla Saona?
Izakhamuzi ezizungeze i-1.200 XNUMX zihlala eSaona Island, ikakhulukazi edolobheni laseMano Juan nasendaweni yaseCatuano. Lawa maqhugwane akhiwe ngezintende nezitshalo, ngoba akuvunyelwe ukwakha lapho futhi imisebenzi yabo eyinhloko ezokuvakasha nokudoba.
Njengendawo yokudlela, e-Isla Saona kunekhabethe elisebenza njengendawo yokudlela yokuphakela izivakashi ezisohambweni nalapho kunikezwa khona isidlo sasemini esinezitsha zerayisi kakhukhunathi nezinhlanzi ezintsha.
Ezinye izindawo ezithakazelisayo eDominican Republic
IPunta Kana ingenye yezindawo ezihamba phambili zeCaribbean ngokuya ngesilinganiso senani lekhwalithi / lentengo elinikezwa izindawo zokungcebeleka ezibandakanya wonke umuntu esimweni sepharadesi. Kwaphela isonto noma amabili, izivakashi zijabulela amanye amabhishi amahle kakhulu eCaribbean phakathi kwemisebenzi yangaphandle nama-cocktails amnandi.
E-Penerula yePedernales uzothola ezinye zezinto ezikhangayo zemvelo ozozibona ngesikhathi seholide eDominican Republic. Izibonelo ezinhle zalokhu yiJaragua National Park, ibhishi laseBahía de las Águilas, ihlathi lamafu laseCachoté, ichibi lamanzi anosawoti e-Oviedo kanye neSierra de Bahoruco National Park, elungele ukubukwa kwezinyoni.
Phakathi kwezinto okufanele uzenze eDominican Republic unethuba lokukhuphukela esiqongweni esiphakeme kunazo zonke e-Antilles: iPico Duarte, indawo yokubuka ehamba phambili ezweni elinamamitha ayi-3.087 ngaphezu kogu lolwandle.
Kuyinkanyezi yeCordillera Central, uchungechunge olukhulu lwezintaba zeDominican Republic olunamakhilomitha angama-250 wokunweba, yize izungezwe ezinye iziqongo eziphakeme kakhulu njengePico del Barranco, iPelona Grande, iPico del Yaque nePelona Chica.
Abathandi bezintaba bazothola ekukhuphukeni ePico Duarte okunye kokuhlangenwe nakho okuhle kakhulu abangaba nakho ezweni laseCaribbean. Lo mzila uhlala izinsuku ezintathu emasimini atshaliwe futhi phakathi nohambo ulala ezindaweni zokukhosela uze ufike phezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » América » ISaona Island, engaziwa ngeDominican Republic
ISaona ayaziwa. Kunezigidi zokunikezwa okufanele zenziwe, futhi kuchazwe kahle ngaphakathi kombhalo. Ngicela, umcabango omncane wesihloko. ?